सत्य सेवा | BeniOnline.com.np जिल्लाका ताजा अनलाइन समाचार
Home विविध सत्य सेवा
२०७६, २८ बैशाख शनिबार २१:५८
०६१ मा नेपाल प्रहरीले इन्स्पेक्टरको भर्ना खुलाउँदा पास हुने एक्लो महिला थिइन् । सानैदेखि फरक करिअरमा आबद्ध हुन चाहेकी डिएसपी खड्का विश्वभरिका प्रतिस्पर्धीलाई पछि पार्दै राष्ट्रसंघको इटालीस्थित ग्लोबल सर्भिस सेन्टरमा ट्रान्जिसनल क्राइम अफिसरमा रूपमा कार्यरत छिन् । सो पदमा पुग्ने नेपाल प्रहरीकी उनी पहिलो महिला अधिकृत हुन् । वसुन्धराले नयाँ पत्रिकाका नवराज मैनालीसँग व्यक्त गरेको दृष्टिकोण, उनकै शब्दमा :
तर, प्रहरी यात्रा त्यति सहज थिएन । प्रहरीमा जाने कुरा बुबाबाहेक कसैलाई पनि मन परेन । किन प्रहरीमा रु अरू धेरै सजिला जागिर छँदै छ नि रु छोरीमान्छेले किन ‘टफ जब’ गर्नुप¥यो भन्ने प्रश्न धेरै झेल्नुपर्‍याे । अझ द्वन्द्वकाल भएकाले सहयोगभन्दा पनि अत्याउने काम हुन्थ्यो । हरेक दिनजसो भिडन्तमा प्रहरीको मृत्यु भएको समाचार सुन्नुपर्दथ्यो । त्यस्तो वेला मैले प्रहरीमा भर्ना हुने अठोट गरेको थिएँ ।
एउटा कुरा के भने म महिला हुँ र पुलिस अफिसर हुँ भनेर ‘डबल प्रुफ’ गर्नुपर्छ । छोरामान्छेले म अफिसर हुँ भनेर प्रुफ गरे पुग्छ, तर हामीले महिला र पुलिस अफिसर हुँ भनेर दुवै प्रुफ गर्नुपर्ने अवस्था छ । अहिले राष्ट्रसंघबाट मलावी भन्ने अफ्रिकी देशमा यहाँको प्रहरीको क्षमता अभिवृद्धिका लागि आएको छु, यहाँ पनि महिला पो आएको भन्ने अवस्था छ । त्यसकारण महिलाका लागि पक्कै पनि बढी नै
चुनौतीपूर्ण छ ।
प्रहरी किन कडा हुन्छ ?
समाजमा सकारात्मक-नकारात्मक सबै ‘भाइब’ हुन्छन् । यो समाजको संरचना नै हो । प्रहरीले गरेका थोरै नराम्रा काम ह्वात्तै बाहिर आउँछ भने धेरै राम्रा काम ओझेलमा पर्छ । प्रहरीका कमजोरीलाई अतिरञ्जित हिसाबले प्रस्तुत गरिदिने प्रवृत्ति गलत छ, यसले प्रहरीको मनोबल गिराउँछ ।
मेरो कुरा गर्दा मलाई अमेरिकाको एउटा विश्वविद्यालयले पठाएको आई–२० भन्दा मलाई विमला थापा म्याडमको बायोग्राफीले आकर्षित गर्‍याे । किन युवा पुस्तालाई विदेशप्रति धेरै आकर्षण छ त रु यो विषयमा राज्यले नै सोच्नुपर्ने वेला छ । तब मात्र प्रहरीप्रति युवा पुस्ताको आकर्षण बढ्नेछ ।
नेपाल प्रहरीमा क्षमता र दक्षता दुवै छ । सिक्ने र सिकाउन सक्ने दुवै क्षमता छ । तर, साधन–स्रोत सम्पन्न प्रहरी होस् भन्ने लाग्छ । हाल संयुक्त राष्ट्रसंघमा पिथ्री तहको ट्रान्जिसनल क्राइम अफिसरका रूपमा कार्यरत छु । यो पदमा छनोट भएपछि धेरैले वसुन्धरा अब युएनमै बस्छ, प्रहरी छोड्छ भन्ने खालका कुरा गर्नुभयो । किन बस्ने यहाँ रु नेपाल प्रहरीले मलाई यत्रो एक्सपोजर दिएको छ भने मैले किन नेपाल प्रहरीलाई छाड्ने ? हो, नेपाल प्रहरीमा केही समस्या छन् ।
कुनै पनि पेसामा करिअरको कुरा पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्छ । सुरक्षा संगठनमा यो अझ महŒवपूर्ण छ । हाम्रोमा करिअर प्रस्ट छैन । साथै पोस्टिङमा प्रस्टता छैन । खुकुरीको धारमा बसेर काम गर्नुपर्ने अवस्था छ । साधन–स्रोतले सम्पन्न त्यो प्रहरी हेर्ने रहर छ जहाँ ढुक्कसँग जागिर खान पाइयोस् र यो संगठनलाई राजनीतिक, सामाजिक कुराहरूले असर नगरोस् भन्ने लाग्छ ।
Previous articleस्वास्थ्य शिविरबाट भकिम्लीमा साढे ५ सयजना लााभान्वित